शीर्ष नेताले अभिभावकत्व लिएका ८ सय विद्यार्थी अलपत्र - नागरिक रैबार
अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा स्टेशनरी दिए, अहिले बेखबर
अपाङ्गता भएका, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने उद्देश्यले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अभिभावकत्व अभियान सुरु गरेका थिए । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान अन्तर्गत पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्यार्थीको संरक्षकत्व प्रदान गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । विभिन्न कारणले बाहिर रहेकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने यो अभियान अन्तर्गत धेरै नेताहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलो पटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइयो ।
त्यसैमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगु र सिरहाका गरी चार जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । ओलीले २०७५ साल वैशाख १ गते मुगुको बुद्ध माध्यामिक विद्यालय माङ्ग्रीमा ठिल्या साङ्मु लामा र छिरिङ छेङ्फोङ लामालाई भर्ना गरेका थिए । त्यस्तै, वैशाख ५ गते सिराहाको रामदुलारी मावि कल्याणपुरमा ५ वर्षीया रुपाकुमारी मण्डल (खत्वे) र अर्का ५ वर्षिय पवन मल्लिक (डोम) लाई विद्यालय भर्ना गराएका थिए ।
तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुगुका सूर्यदेव रोकाया र पुष्कर रोकायाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । त्यस्तै, तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुगुका कार्मा साङ्जीन लामा, सिरहाका सोनुकुमार खत्वे र सप्तरीकी रिंकु मरिकको तथा हालका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले मुगुका सन्तोष भियालको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए ।
शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार ३८१ जना नेताले ८०८ जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । तर पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिका अहिले अलपत्र परेका छन् । सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनको जानकारीअनुसार अहिले ती विद्यार्थीहरू स्कुलको सम्पर्कमा नरहेको वा स्कुल पढ्न आएका छैनन् ।
ओलीले अभिभावकत्व लिएर भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई बेलाबखत पढाई खर्च, लत्ताकपडा र औषधी खर्च बेहोर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि खर्च नदिइएको प्रधानाध्यापक लग्नसिंह सेजुवालले जानकारी दिए । मन्त्रीले कक्षा १ देखि उच्च शिक्षासम्म सबै खर्च बेहोर्ने गरी अभिभावकत्व लिए पनि हालसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको अभिभावक खड्कबहादुर कुलालले बताए । लामो समय भइसक्दा पनि ती विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिनेहरूले सोधिखोजी समेत गरेका छैनन् । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अभिभावकत्व लिएका बालक पूर्णबहादुर कुलाल विद्यालय छाडिसकेका छन् ।
देशभर विद्यालय उमेर समूहका प्राथमिक तह (५–९ वर्ष उमेर समूह) का ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्क छ । विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना दरभन्दा निरन्तरताको समस्या ठूलो छ । तर विद्यालय आएका पनि प्राथमिक तहबाट ६ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरिने गरेका छन् ।
अभिभावक ग्रहण अभियान असफल: शिक्षाविद्
सरकारको अभिभावक ग्रहण अभियान असफल भएको छ । शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माका अनुसार अभिभावकको दायरा निकै नै फराकिलो भएका छ । अभिभावक भनेको खानपिन, पढाइलेखाइ, स्वास्थ्य, बसोबासको उचित प्रबन्ध र मनोरञ्जन लगायत बालबालिकाको हकमा पर्ने सबै कुरा बेहोर्न सक्ने हुनुपर्छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाको विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि उनीहरूलाई ड्रेस र पाठ्यपुस्तक दिएर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । सरकारी विद्यालयमा भर्ना र किताब निःशुल्क छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले दिन नसकेको कुरा के हो ? त्यो दिने हो । नेपालमा विद्यालयको निरन्तरता मुख्य चुनौती हो । के कारणले विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता गर्न सकेको छैन, त्यो समस्याको समाधान गरेर विद्यालय नियमितताको लागि आकर्षण गर्ने कुरा ल्याउन आवश्यक छ ।’ राम्रोसँग खान नपाएको बालबालिकाले कसरी पढ्न सक्छ ? उनको प्रश्न छ ।
सुरुमा बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा स्टेशनरी सामान, झोला, ड्रेस दिएका थिए । शर्माले भने, ‘यति गरेपछि अभिभावक बनिन्छ ? अभिभावकले भर्ना गरेपछि त्यो बच्चाले कसरी शिक्षा पाउँछ । कसरी निरन्तरता पाउँछ । कसरी राम्रो गर्छ भन्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । बेलाबेखत सोधी खोजी गर्नुपर्छ । संघीयता ल्याउने, स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिने ।’ केन्द्रीय मन्त्रीले बच्चा भर्ना गर्ने अभियान आफैमा हाँसोलाग्दो भएको उनी बताउँछन् । ‘ सरकारले निःशुल्क दिएकै कुरा दिएर अभिभावक बन्नु छ, त्यो पनि एक दुई चोटि दियो, सकियो ।’ उनले भने ।
‘सरकारले अभिभावक ग्रहण गर्ने अभियान सुन्दा नै यो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने लागेको थियो । अहिले आएर त्यही भयो । स्कुलको ड्रेस र पाठ्यपुस्तक किनेर दिने केन्द्र सरकारको काम होइन । ‘एउटाले एउटालाई पढाऔँ’ भन्ने कार्यक्रम पञ्चायतमा पनि थियो । त्यो पनि दिगो भएन,’ शिक्षाविद् शर्मा भन्छन्,‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले दीर्घकालीन नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । बालबालिकाले विद्यालय निरन्तरता गर्न नसकेको कारणबारे योजना बनाउने हो ।’ रातोपाटीबाट साभार
विश्वकप प्लेअफ फाइनलः इतिहास रच्ने लक्ष्यमा वेल्स र युक्रेन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले यसपटक एसइईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिक रूपमा समस्या नआए असार ३२ गतेभित्र […]
काठमाडौं । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा अवस्थित कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा एक जना मात्रै विद्यार्थी छन् । उनी हुन् अढाइ वर्षीय सिमरन सोमै । चालु शैक्षिक सत्रमा उनीसँगै अरु दुई जना आएका थिए । तर, दुई जनालाई अभिभावकले निजी विद्यालय लगेपछि सिमरन एक्लै विद्यालय आइरहेका छन् । कक्षा […]
काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११–१२ को पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनबाट छपाउने भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । ‘पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भए पनि कक्षा […]
गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका विद्यालयमा अध्ययनरत तीन असहाय र ११ अत्यन्त विपन्न परिवारका विद्यार्थीको अवस्था देखेर चिन्तित छन् । अरुले दिएमात्र खान पाउने, नभए विद्यालयले दिने दिवाखाजाका भरमा दिन बिताउन बाध्य कक्षा ३ मा अध्ययनरत बाबुआमाविहीन ११ वर्षीया अञ्जु परियार, साथीहरूको घरमा आश्रय लिएका कक्षा ६ मा अध्ययनरत पुजन […]
कक्षा १ देखि ३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो बडीमालिका पढाई गरिने
नागरिक रैबार/बाजुरा २२ जेठ। बडीमालिका नगरपालिकाले आधारभुत तह कक्षा १ देखि ३ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो बडीमालिका नामक पुस्तक पढाई हुने भएको छ । नगरपालिकाले नगरमा एउटै प्रकारको सिकाई सहजीकरण विधि सधै र सवैतिर उपयु्क्त हुनसक्ने भएकोले स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित भएर आधारभुत तहमा हाम्रो बडीमालिका पुस्तक पढाई हुन लागेको हो । नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा […]
यार्सा सिजन सुरू, मुगुका विद्यालय बन्द
मुगुमा कार्मारोङ गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यार्सागुम्बा टिप्न पाटनतिर गएपछि डेढ दर्जन विद्यालय बन्द भएका छन् । गाउँपालिकाको मुगु, डोल्फु, ताखा, खारी, रिउस, पुवा, दाउरा, डोल्फू, माग्री र छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको रोवा, रुगालगायत विद्यालयमा कक्षा ५ देखि १० सम्मका छात्रछात्रा यार्सा टिप्न गएपछि विद्यालय बन्द गएका हुन् । उनीहरू सातु, माल सामान, खाजा बोकेर […]